किन सुन्निन्छ पुरुष अन्डकोष? अन्डकोष सुनियो या दुख्यो भने यसो गर्नुहोस ! – ZoomNP
किन सुन्निन्छ पुरुष अन्डकोष? अन्डकोष सुनियो या दुख्यो भने यसो गर्नुहोस ! प्रकाशित मिति: शनिवार, फाल्गुण २९, २०७२ समय - २१:५१:५९ म २२ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । केही दिनदेखि मेरो दाहिने अण्डकोष दुख्नुका साथै केही सुन्निएको छ, जसले गर्दा मलाई दैनिक क्रियाकलापमा केही असहज महसुस भैरहेको छ । यो समस्याका बारेमा मैले परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल पनि गर्न सकेको छैन । के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो ? के हस्तमैथुनका कारण यस्तो समस्या देखा पर्छ ? पछि गएर मेरो सन्तान नहुने पो हो कि ? यो समस्याको कुनै उपचार छ कि ?
तपाईंको समस्यासम्बन्धी कुरा गरिहाल्नुभन्दा पहिले अण्डकोषका बारेमा थोरै चर्चा गरौं । अण्डकोष पुरुषमा भएको एउटा प्रमुख प्रजनन अङ्ग हो र यसले शुक्रकीट तथा पुरुषत्व प्रदान गर्ने हार्मोनको उत्पादन गर्छ । अण्डकोष लिङ्गको फेदनिर झुन्डिएको छालाको पातलो थैली (अण्डकोष थैली) भित्र हुन्छ । अण्डकोष र अण्डकोष थैली फरक कुरा हुन् भन्ने कतिपय व्यक्तिलाई जानकारी नहुन सक्छ । स्वभाविक रूपमा नै यी दुई सुन्निने अनि दुख्ने कारण पनि केही फरक हुन्छ । यस्तै १०–११ वर्षको उमेरदेखि अण्डकोषको विकास सुरु हुन्छ र किशोरावस्था भरी निरन्तर जारी रहन्छ । यो अलि चेप्टो अण्डा आकारको हुन्छ । सालाखाला १० देखि १४ ग्राम तौल भएको यो अङ्गको आयतन सालाखाला ४x३x२ दशमलव ५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यसभन्दा केही बढी र केही कम हुनु पनि सामान्य नै हो ।
अण्डकोष किन दुख्छ ?
अण्डकोषको दुखाइ भन्नाले दुवै वा कुनै एक अण्डकोषको पूरै वा केही भागमात्र भए पनि दुख्नुलाई जनाउँछ । फरक भए पनि अण्डकोष थैलीको दुखाईको कुरा पनि कतिपय स्थितिमा मिसिएर आउँछ । अण्डकोष दुख्ने कारणहरूलाई छोटकरीमा सूचिकृत गर्ने हो भने चोटपटक, संक्रमण तथा अण्डकोष बेरिने इत्यादिलाई लिन सकिन्छ । अण्डकोषको पीडा एकदमै संवेदनशील हुन्छ । अण्डकोष बेरिने स्थितिमा सुन्निनुका साथै एकदमै दुख्छ । यो एउटा आपत्कालीन स्थिति हो जुन तपार्इंलाई भएजस्तो बुझिँदैन । संक्रमणको कुरा हुन सक्छ । यस्ता संक्रमण विषाणु वा जीवाणु दुवै कारणले हुन सक्छ । यस्ता संक्रमणमध्ये केही यौन रोग पनि हुन सक्छन् । तपाईंले अहिलेसम्म यौनसम्पर्क राख्नु भए–नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यौनसम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने संक्रमणलाई संक्रमित यौनरोग भनिन्छ । हाँडे आएपछि पनि अण्डकोषको संक्रमणले अण्डकोष दुख्ने र सुन्निने हुन सक्छ ।
अण्डकोषको शोथका साथसाथै अण्डकोषनजिकै रहने अर्को अङ्ग इपिडिडाइमिसको शोथ तथा पौरुष ग्रन्थिको शोथका कारणले पनि अण्डकोष दुख्न सक्छ । भ्यारिकोसिल भने विशेष गरेर दाहिनेतिर नभई बायाँतिर हुन्छ । यो रक्तनसामा रगत बढी भरिने कारणले हुन्छ । यो स्थितिमा दुख्ने भन्दा पनि केही असजिलो हुने र तानिएर दुखेजस्तो हुने अनुभव हुन्छ ।
अण्डकोषको पीडा पछि त्यस्तै दुख्ने वा अन्य कुनै लक्षण देखिएको छ कि छैन विचार गर्नुहोला । तपाईंले लेख्नुभएको सीमित जानकारीका आधारमा यकिनका साथ तपाईंलाई के भएको होला भन्न गाह्रो छ त्यसैले चिकित्सकलाई देखाउनु बेस हुन्छ ।
के हस्तमैथुन गर्नाले यस्तो समस्या हुन्छ ?
हस्तमैथुनकै कारणले यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । हस्तमैथुनका क्रममा धेरै समय उत्तेजित अवस्थामा रहेर पनि वीर्य स्खलन हुन नसकेको स्थितिमा अण्डकोषमा केही भारीपन अनुभव हुन सक्छ । अण्डकोषमा कुनै संक्रमण वा चोटपटकजस्ता कुनै समस्या छन् भने हस्तमैथुन गर्दा हुने असजिलोपन वा दुखाइलाई हस्तमैथुन नै कारण हो भन्न मिलेन ।
पछि गएर सन्तान नहुने पो हुने हो कि ?
अण्डकोषमै शुक्रकीटको उत्पादन हुन्छ । अण्डकोषको कतिपय खराबीले शुक्रकीटको उत्पादन क्षमतामै असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले अण्डकोषमा हुने खराबीका बारेमा विशेष चनाखो हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि हाँडेपछिको अण्डकोषको संक्रमण । अण्डकोषको तापक्रम बढी हुने स्थिति जस्तै कि भ्यारिकोसिलले पनि शुक्रकीटको उत्पादनमा कमी ल्याउँछ ।
यो समस्याको कुनै उपचार छ कि छैन ?
तपाईंलाई थाहै होला, समस्याअनुसार नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तपार्इंले दिनुभएको जानकारी निकै सीमित भएकाले समस्या यो नै हो भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त समस्याको निदान गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि समस्याअनुसार नै उपचार गराउनुपर्छ । यस्तो उपचार गर्दा औषधीको सेवनदेखि शल्यक्रियासम्मका विधि प्रयोग हुन सक्छन् । दुखाइको सन्दर्भमा पीडा कम गर्ने औषधी चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
डा.राजेन्द्र भद्रा : साप्ताहिक